४१ वर्षदेखि शिक्षण अस्पतालभित्रै गाडिन्छ शव - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, माघ ५ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज परिसरभित्र आठ आना खाली जग्गा छ । त्यो जग्गा ४१ वर्षदेखि चिहानका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस डा. केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय, शिक्षण अस्पताललाई १० करोड, डीनमा डा. अग्रवालकै निरन्तरता
याे पनि पढ्नुस टिचिङबाट निजी अस्पतालमा बिरामी रिफर
‘म पनि पहिलोपटक सुन्दै छु, एक–दुई दिनमै वास्तविकता बुझी निर्णय लिनेछु । यो मानवीय संवेदनाको विषय हो, यसमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
याे पनि पढ्नुस शिक्षण अस्पतालबाट करिब २०० जना नर्सहरुले राजीनामा दिएर विदेश पलायन
ट्याग्स: teaching hospital